I-Mullite cordierite ceramic sagger ye-Sintered lithium ibhetri
Ekhaya > Iimveliso > ISagger yeCeramic eRefractory
I-Sinter Lithium Ibhetri yeCoathod Material yoMlilo Udongwe lweCeramic Saggar
Umgangatho wodongwe lomlilo lomlilo wesagger uMvelisi | XTL
I-refractory cordierite ceramic sagger yomgubo we-sintering
Sizixakekise ekunikezeni uluhlu olubanzi lweRefractory Ceramic Sagger. Ezi Refractory Ceramic Sagger ziyafumaneka kwiinkcukacha ezahlukeneyo ezihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zoshishino lobunjineli.
Umntu obhuqayo (ekwabhalwa ngokungafanelekanga njengesagger okanye i-segger) luhlobo lwefanitshala ye-ontini. Sisikhongozeli esifana nebhokisi yeceramic esisetyenziselwa ukutshisa izinto zomdongwe ukuvala okanye ukukhusela izinto ezibaswa ngaphakathi kwe-onti. Ngokwemveli, i-saggars yenziwa ikakhulu kwi-fireclay.I-Saggars isetyenziselwa ukukhusela, okanye ukukhusela, i-ware kwidangatye elivulekileyo, umsi, igesi kunye nenkunkuma ye-kiln.igama lisenokuba sisishunqulelo segama elithi ukhuseleko. iiseramikhi ukukhusela impahla ekudibaneni ngokuthe ngqo namadangatye kunye nokonakala kobutyobo kwiziko.
Udongwe lomlilo saggar Isetyenziselwa i-calcining zonke iintlobo ze powder ekhethekileyo ezifana ne-lithium ibhetri ye-ternary materials ingakumbi i-523,622, i-lithium cobalt oxides kunye nezinye izinto ezifanayo. Kwinkqubo yokudubula, i-saggar ibonisa iimpawu zokumelana nokushisa okuphezulu, ukungagxili, akukho ukuphendula, ubomi obude kunye nokuchasana kwe-alkali.
Isixhobo seSinter Lithium yeBattery Coathod
Udongwe lomlilo saggar
Iyakwazi ukumelana nokothuka okuphinda-phindayo kwe-thermal ukusuka kwi-1350 degree Celsius ukuya kwiqondo lobushushu begumbi
I-Saggar Nge-Battery Material , i-refractory, injongo yohlalutyoEyona njongo ye-crucible kunye ne-sagger njengesiqulathi sokuhlalutya kunye nokudubula izinto kunye nemveliso esetyenziswa kumashishini awohlukeneyo. Umzekelo: uhlalutyo lwamalahle, ukunyibilika kwesinyithi, uhlalutyo kunye nokudutyulwa kwemathiriyeli ekrwada yeekhemikhali, uhlalutyo nokunyibilika kweglasi, uhlalutyo kunye nokudutyulwa kwezinto ezinqabileyo zomhlaba kunye neminerali, ukudutyulwa okuphezulu.Iqondo lobushushu njengeemveliso zeceramic kunye nokunyibilika kwe-single-crystal raw materials.Kwiimeko eziqhelekileyo, qala ubeke izinto ezifuna ukuhlalutywa kwaye zifakwe kwi-crucible okanye i-sagger. Emva koko shushu. Isantya sokufudumeza kunye nokuhla kweqondo lobushushu ngokweempawu zezixhobo kunye neemveliso, ziyakhawuleza okanye zicotha.Ngenxa yokwanda kwe-thermal yemathiriyeli ekrwada ezenziwe ngayo izikhephe kunye ne-saggers, ukufudumeza okukhawulezayo kakhulu okanye ukupholisa kuya kukhokelela ngokulula ekuqhekekeni. the crucibles and saggers.Eyona ndlela ingcono kukucotha, nto leyo enokwandisa ubomi bazo.
I-Mullite ceramic iphinda isetyenziswe kwiishelufa, i-saggers kunye neeprops kushishino lwe-ceramic kunye ne-cordierite. Kuba i-mullite ine-deformation ephantsi ye-creep, i-thermal yokumelana nokothuka kunye nokuxhathisa okulungileyo kokuhlwa ngexesha lokudubula.
I-Ceramic sagger isetyenziswa ngokubanzi kwifenitshala yobushushu obuphezulu kwi-ceramics kwimizi-mveliso, iiseramics zesakhiwo, imathiriyeli yeekhemikhali kunye neshishini lezinto zombane.